एक लामो समयदेखि पहिले नै पुरुष हस्तमैथुनको विषयवस्तु निषेध बन्द भएको छ। फिजलोजीहरू एकजुट भई मान्छन् कि आत्म-सन्तुष्टि पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जसले जीवको जीवनी बढाउँछ र सम्पूर्णमा, सकारात्मक मनोभावलाई असर गर्छ।
पुरुष स्वीकार गर्दछ कि यदि तिनीहरू विवाहित हो या महिला संग एक गंभीर सम्बन्ध हो, उनि हस्तमैथुन बंद नहीं गर्छन, र यो दुवै पार्टनर र एक्लै संग एक साथ हुन्छ।
एक्लै हस्तमैथुनले मानिसलाई अपमानजनक जोनहरू खोल्न मद्दत पुर्याउन सक्छ, जुन पहिले थाहा थिएन। सबै पछि, आफैसँग मात्र एक्लै तपाईं छिटो बिना आराम गर्न सक्नुहुन्छ, आत्म-अध्ययनमा आफैलाई विसर्जन गर्न सक्नुहुनेछ जुन अक्सर तपाईंको साथीको नजिक हुँदा उपलब्ध छैन।
यो ध्यान दिनु पर्छ कि पुरुष दिमाग अत्यन्त आविष्कारक छ, र मानवता को एक मजबूत आधा विभिन्न यन्त्रहरु को उपयोग गर्दछ जुन संतप्ति को उज्ज्वल बनाउन मा मदद गर्दछ। यो दुईमा एक तकिया हुन सक्छ, एक प्लास्टिकको थैलो, स्नेहक बनाइयो, फल वा सब्जी संग राम्रो तरिकाले स्नेहक, छेद बनाइएका र धेरै अन्य वस्तुहरु संग कहिलेकाहीँ यस भूमिकामा कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ।
ठीक छ, नर जनसंख्याको "उन्नत" भाग Masturbators प्रयोग गर्दछ, जो भन्दा राम्रो, निस्सन्देही, जापानी कम्पनी टेंग द्वारा बनाईएको छ। उज्ज्वल orgasms प्रेमीहरूको लागि, डिस्पोजेबल masturbators को एक लाइन Tenga कप प्रस्तुत गरेको छ, जसमध्ये केहि मौखिक सेक्स नकल, अन्य क्लासिक छन्, र अन्य - गुदा। सबैले तिनीहरूको बीचमा के छनौट गर्न सक्दछन्।
यस कम्पनीले प्रतिनिधित्व गरेको masturbators को एक अन्य लाइन - Tenga 3D, धेरै लामो पहिले सिर्जना गरिएको थिएन, तर पहिले नै connoisseurs बीच लोकप्रियता प्राप्त भयो। Tenga3डी सीरीजले सम्पूर्ण संसारलाई जितेको छ र बजारमा पाँच फरक नामहरू मा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
वैसे, कम्पनीहरु जुन सेक्स को खिलौनेहरु लाई उत्पादन गर्छन, विशेष रूप देखि त्यही तान्गा, लेप्स र सीमा को कदम ले, र अब सेक्स खिलौनेहरु लाई बनाइन्छ जो एक घटना को रूप मा हस्तमैथुन को हाम्रो धारणा को रूप मा बदल देगा। विकास गरिएको रोबोटहरू र अन्तरक्रियात्मक खेलहरू, एक व्यक्तिलाई संक्रामक वितरण गर्न सक्षम छ जुन उनले क्लासिकल सेक्ससँग अनुभव गर्न सकेन।
यो अब हलिवुड कथा होइन - यो उत्पादनको पहिलो नमूना अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूद्वारा आक्रमण गरिन्छ। आधुनिक सेक्स खिलौने नैतिक रूपमा अप्रचलित नगर्नुहोस्? कतिपय वर्षहरूमा मानवताले कस्तो प्रकारको यौन खेल खेल्छ? के यो व्यक्तिलाई वास्तविक साझेदारको नजिक हुन आवश्यक छ, वा यो पूर्ण रूपमा एक आभासी द्वारा प्रतिस्थापित हुनेछ? हामी देख्नेछौं - हामी देख्नेछौं ... "
सुन्दर मुस्कान कसरी सिक्न? र यो के हुनेछ?
महिला लागि रोमाञ्चक घटेको: प्रतिक्रिया। कसरी लागू गर्न र के प्रभाव आशा गर्ने?
समलिङ्गी कसरी बन्न मा धेरै सिद्धान्त
ओछ्यानमा त्रुटिहरू 10 महिला। प्रमुख गल्ती महिलाहरु
ओलम्पिक 1994: खेल, रूसी हकी टोलीले कुनै पनि सिट जित्न गर्नुभयो जब
एक उच्च कोलेस्ट्रल मा भोजन
"सुनको स्याउ" (नोवोसिबिर्स्क) - perfumery एक हाइपरमार्के र प्रतिष्ठित ब्रान्ड को कस्मेटिक्स